पहिरोको पीडा : 'घर बगाएको महिनादिन बित्यो, त्रिपालबाहेक राहत पाएको छैन'
शेरबहादुर ऐर आइतबार, भदौ २१, २०७७, १६:०४
चुरे (कैलाली)- कैलाली जिल्ला चुरे गाउँपालिका-५, पट्रेनी। कौशिला हरखाली मगर पालमुनि बसिरहेकी थिइन्। उनको काखमा नाबालक छोराछोरी थिए। पालमुनि बस्न थालेको एक महिना भएको छ। बाढीपहिरोले घरबार लगेपछि उनी पालमुनि बस्न थालेकी हुन्। पहिरोले अन्नपात सबै बगाएपछि उनलाई हरेक दिन नाबालक छोराछोरीलाई साँझबिहान के खुवाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ।
'म त केही दिन नखाएरै पनि बाँच्न सक्छु, तर बालबच्चालाई के खुवाउने,’ बाढीपहिरो पीडितबारे रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारहरूसामु उनको वेदना पोखियो।
साउनमा आएको पहिरोले उनको घरआँगन पुरेको थियो। घरआँगन पुरेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई त्रिपाल उपलब्ध गराएको छ। चुरे गाउँपालिकाले भीमदत्त राजमार्गको छेउमा पर्ने बेल्चप्लानमा बसोबास गराएको छ।
'अहिले म सडकछेउमा त्रिपालमुनि दिनरात काट्दै छौं। हामीले राहतको नाममा केही पाएका छैनौं। पाएको भनेको यही एउटा त्रिपाल मात्रै हो। यसरी त कति दिन बस्न सक्छौं? हरेक दिन छाक टार्नै धौ-धौ भइसक्यो,' उनले भनिन्।
चुरे गाउँपालिका-५ दुहुँका दल्ले बोहरा पनि एक महिनादेखि त्रिपालमुनि बसिरहेका छन्। सडकको छेउमा पाल टाँगेका उनले सुत्नका लागि बोराहरू बिछ्याएका छन्। ‘सरकारले हामीलाई यही एउटा त्रिपाल दिएको छ। हामीसँग अन्नपात केही पनि छैन। छाक टार्न समस्या भएको छ,’ हातमा पोलेको मकै देखाउँदै उनले भने, 'यही खाएर दिन गुजारिरहेका छौं।'
पहिरोले उनको घरसँगै अन्नपात पनि सबै पुर्‍यो। 'बजारबटी खानालाई थोडथोडा सामान उधारो ल्याउँछौं, पैसा नि नाइ छि। क्या अर्नु (बजारबाट खानाका लागि थोरै सामान उधारो ल्याउँछौ पैसा पनि छैन के गर्ने होला),’ उनी भन्छन्।
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि खानीडाँडा बजार पनि खुलेको थियो। भदौ ४ गतेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि खानीडाँडाका पसल पनि बन्द भए। स्थानीय दल्लु बोहराले भने, 'पसल खुला हुँदा साहुहरूले हामीलाई उधारो मै भए पनि अन्नपात दिइरहेका थिए। अहिले खानालाई सामान ल्याउँ भने पसलले पनि दिन मान्दैनन्।'
साउनको पहिरोले पट्रेनीका लालबहादुर मगरको घर तथा अन्नपात सबै बगायो। उनी पनि अहिले पालमुनि बसिरहेका छन्। 'हामीले के गरेर खाने? कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने समस्या छ। उनले पनि सरकारले त्रिपालबाहेक अरु केही पनि सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै भने, 'यो त्रिपालले पनि पानी रोक्दैन।'
पट्रेनीकै हर्क बहादुर अरखालीमगरका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू आउछन्, सोधपुछ गर्छन्, आश्वासन दिन्छन्, जान्छन्। 'एक महिनाभन्दा बढी भयो, आश्वासनको त बाढी नै आयो, तर वास्तविक बाढीको पीडा कम भएन,' उनले भने।
चिसो सडकमाथि त्रिपालमुनि बस्दा चिसोले हामीहरूलाई स्वास्थ्यमा समस्या पनि देखिन थालिसक्यो स्थानीय इन्द्रबहादुर अरखाली मगरले भने, ‘बालबालिका र वृद्ध–बृद्धालाइ त झन् समस्या भएको छ। अहिलेसम्म संघसंस्था र राज्यको कुनै निकाय पनि आएका छैनन्।’
गत साउन १७ गते राती आएको भारी वर्षा र पहिरोले पट्रेनी, दुँहु, राजवन र गुणीगाँउ ४६ घरधुरी विस्थापित भएका छन्। ती मध्ये २० घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विस्थापितहरू एक महिनादेखि भीमदत्त राजमार्गको छेउमा बस्दै आएका छन्।
पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका गुणीगाउँमा २५ किलो चामल वितरण गरिएको चुरे गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर-५ का वडाध्यक्ष नरबहादुर तामाङले बताए। उनले अन्य गाउँका विस्थापितहरूलाई गाउँपालिकाको बैठक बसेर राहत वितरण गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पहिरो पीडितहरूको तथ्यांक सकलन गरेर राहतको लागि कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको बताए।
'हामीले पहिरो पीडितहरूलाई केही दिनको लागि मात्रै सडक छेउमा राखेका छौं। हामी पहिरो पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरिरहेका छौं। पहिरो आएको एक महिना भइसकेको छ। धेरै जनाको घर उजाड भएको छ। हामी उनीहरूको उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौं,' उनले भने।
शेरबहादुर नेपाललाइभका संवाददाता हुन्
धनगढीमा कोरोना संक्रमणदर उच्च बन्दै, उपमहानगरको नियन्त्रण प्रयास फितलो
सुदूरपश्चिममा आईसीयू खोज्दाखोज्दै संक्रमितको मृत्यु हुँदै (कहाँ कति शय्या?)
संघीय ऐनसँग बाझिएपछि औद्योगिक ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार
आजको मौसम : अपराह्नतिर पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना महाशाखाका अनुसार हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आइतबार, जेठ २, २०७८
चट्याङ लागेर वैशाखमा मात्रै २१ जनाको मृत्यु राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार चट्याङमा परेर अन्य ८४ जना घाइते भएको र ५० चौपायाको क्षति भएको छ। शनिबार, जेठ १, २०७८
सञ्‍चारकर्मीलाई विज्ञको सुझाव- आतंक होइन, विश्वास प्रवाह गरौं कोरोना महामारीको बढ्दो संक्रमणबीच सूचना र समाचार प्रवाह गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल पत्रकार... शनिबार, जेठ १, २०७८
कलाकार रवि डंगोल काेराेना संक्रमित, भन्छन्- आत्मबलले यसलाई जित्छु आइतबार, जेठ २, २०७८
जुममार्फत सातै प्रदेशमा कोभिडको अवस्थाबारे अन्तर्क्रिया गर्दै नेपाली कांग्रेस, शीर्ष नेता सहभागी हुने आइतबार, जेठ २, २०७८
बेनी अस्पतालमा बनाइयो अक्सिजन बैंक आइतबार, जेठ २, २०७८
कोरोना जित्नेको सन्देश : हौसला र आत्मबल नै ठूलो औषधि रहेछ आइतबार, जेठ २, २०७८
चन्द्रागिरिबाट नगदसहित पाँच जुवाडे पक्राउ आइतबार, जेठ २, २०७८
सटकट खबर [२०७८ वैशाख ३१] शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८
नेपाल लाइभ समाचार [भिडियो] शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८
फुटको संघारमा जसपा: यस्तो छ फुटेपछिको सम्भावित परिदृष्य शनिबार, जेठ १, २०७८
बादलको 'इन्ट्री'पछि ओली-नेपाल सहमति प्रयासमा संशय, नेपालपक्ष भन्छ- बादललाई स्वीकार्दैनौं, जेठ २ बाट यताउता गर्दैनौं शनिबार, जेठ १, २०७८
भाइरल तस्बिरबारे घनश्याम भुसालको प्रतिक्रिया- प्रधानमन्त्रीका फोटोग्राफर मात्र भएको ठाउँबाट फोटोको 'प्रचार' भो शनिबार, जेठ १, २०७८
विजय गच्छदारलाई पत्नीशोक, कोरोना संक्रमणबाट श्रीमती निर्मलाको मृत्यु शनिबार, जेठ १, २०७८
प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्री नियुक्ति पनि विवादमा, होला त न्यायिक पुनरावलोकन? शनिबार, जेठ १, २०७८
क्राइसिस होइन कुर्सी व्यवस्थापनमा लाग्दा यो अवस्था आयो : डा जनक कोइराला [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
महन्थलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ : अर्जुननरसिंह केसी [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
ओलीको पुनः सत्तारोहणपछि संविधानको संकट टर्‍यो कि सर्‍यो! रामेश्वर बोहरा
सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाउन मिल्दैन चन्द्रकान्त ज्ञवाली
खोप रोक्नेलाई किन मुद्दा नचलाउने? गौरीबहादुर कार्की
थप ८ हजार ९६० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८